ခေတ်မီမော်တာ အထည်ချုပ်စက်သင်တန်းဆင်းပွဲနှင့် တာဝန်ခန့်အပ် | Ministry of Border Affairs
ခေတ်မီမော်တာ အထည်ချုပ်စက်သင်တန်းဆင်းပွဲနှင့် တာဝန်ခန့်အပ်
by Thinmbadm1n / Aug 31, 2014 / comments
ရန်ကုန် ၂၀၁၄ခုနှစ် သြဂုတ် လ ၃၁ ရက်
နယ်စပ်ဒေသအပါအဝင်ကျေးလက်နေပြည်သူများ၏ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးပေးရန် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန နယ်စပ်ဒေသကျေးလက်မြို့ပြနေပြည်သူများ လူမှုစီးပွားဘဝ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးခေတ်မီမော်တာ အထည်ချုပ်စက်သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၂) သင်တန်းဆင်းပွဲ အခမ်းအနားကိုသြဂုတ် ၃ဝရက် နံနက် ၈ နာရီက ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)အမှတ် (၅၁) ရပ်ကွက်မြဝတီမင်းကြီးလမ်းရှိ ဗဟိုလေ့ကျင့်ရေးကျောင်း၌ ကျင်းပရာ နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး သက်နိုင်ဝင်းကိုယ်စားညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးစံရွှေအောင်တက်ရောက်၍ သင်တန်းဆင်းအမှာစကား ပြောကြားသည်။
အခမ်းအနားသို့ အလုပ်သမားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများ၊မြန်မာနိုင်ငံအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမြင့်စိုး၊ ဗဟိုလေ့ကျင့်ရေးကျောင်းကျောင်းအုပ်ကြီးဦးမင်းသန့်၊ အထည်ချုပ်ကုမ္ပဏီများမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ နည်းပြများနှင့်သင်တန်းဆင်း သင်တန်းသူ ၁ဝဝ တို့ တက်ရောက်ကြသည်။
ယင်းနောက် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က သင်တန်းသူများအား သင်တန်းဆင်းအောင်လက်မှတ်များ၊ နည်းပြများနှင့်သင်တန်းသူများအတွက်ထောက်ပံ့ငွေများပေးအပ်ပြီး သင်တန်းဆင်း အထည်ချုပ်စက်ရုံများတွင် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ကြမည့်သင်တန်းသူ ၁ဝဝ အား အလုပ်သမားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနသို့ လွှဲပြောင်းပေးသည်။
သင်တန်းသူများမှာ ဗမာ ၅၄ ဦး၊နာဂ ၁ဝ ဦး၊ ရှမ်း ၁ဝဦး၊ ကယားသုံးဦး၊ ပလောင်လေးဦး၊ လီဆူလေးဦး၊ ချင်း ၁ဝ ဦး၊ ရခိုင်ငါးဦးတို့ဖြစ်သည်။ ထို့နောက် အလုပ်သမားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ရန်ကုန်တိုင်းဦးစီးမှူးဒေါ်မို့မို့သွင်က အလုပ်သမား အသိအမှတ်ပြုလွှာများပေးအပ်ပြီး အထည်ချုပ်အလုပ်သမား ၅ဝ ကို (Myanmar Synergy Garment Co,Ltd.) မန်နေဂျာ ဦးချိုလွင်ဦးအားလည်းကောင်း၊ အလုပ်သမား ၅ဝကို(Cherry Garment Co.,Ltd.) မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ ဒေါ်ယဉ်ယဉ်ဌေးအား လည်းကောင်း လွှဲပြောင်းပေးအပ်သည်။
ယင်းနောက် (Cherry Garment Co.,Ltd.) မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ ဒေါ်ယဉ်ယဉ်ဌေးက သင်တန်းဆင်း အထည်ချုပ် အလုပ်သမားများအား အထည်ချုပ်ဝန်ထမ်းအဖြစ် ခန့်အပ်လွှာပေးအပ်ပြီး အလုပ်ခန့်အပ်ရခြင်း အကြောင်းရင်းနှင့် အလုပ်သမားများ၏ ခံစားခွင့်နှင့် ရပိုင်ခွင့်များ ရှင်းလင်းပြောကြားသည်။ နယ်စပ်ရေးရာ ဝန်ကြီးဌာနပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနသည်နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲ၏ လမ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီ နယ်စပ်ဒေသကျေးလက်၊မြို့ပြနေပြည်သူများ၏ လူမှုစီးပွား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ဦးစားပေး လိုအပ်ချက်များဖြည့်ဆည်းရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများဖော်ထုတ်ပေးတွေက် စဉ်ဆက်မပြတ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၁)အား သြဂုတ်၎ ရက်မှ ၁၅ ရက်အထိသင်တန်းဆင်းပြီး (Myanmar Synergy Co.,Ltd.) တွင် အလုပ်တာဝန်များပေးအပ်ကာ လုပ်ငန်းတာဝန်များဆောင်ရွက်နေကြပြီဖြစ်သည်။
ယခု သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၂)အားသြဂုတ် ၁၈ရက်တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ပြီး၂၉ ရက်တွင် သင်တန်းဆင်းပြီးမြောက်ကာ (Myanmar Synergy Co.,Ltd.)တွင် တိုင်းရင်းသူ ၅ဝ ၊ (Cherry Garment Co.,Ltd.)တွင် ၅ဝ ခွဲဝေအပ်နှင်းကာ အထည်ချုပ်ကျွမ်းကျင် ဝန်ထမ်းများအဖြစ် တာဝန်များ ထမ်းဆောင်တော့မည်ဖြစ်သည်။ နယ်စပ်ဒေသအပါအဝင် ကျေးလက် မြို့ပြနေပြည်သူများ လူမှုစီးပွားဘဝ အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ပိုမိုဆောင်ရွက်နိုင်ရန်ခေတ်မီမော်တာအထည်ချုပ်စက် သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၃)တွင် နယ်စပ်ဒေသအသီးသီးမှ တိုင်းရင်းသူ ၁၄ဝ တိုးမြှင့်သင်တန်းပေး၍ အထည်ချုပ်စက်ရုံများတွင် ခန့်အပ်တာဝန်ပေးရန်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားရှိပြီးဖြစ်သည်။
ထို့နောက် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့်အဖွဲ့သည် ခေတ်မီမော်တာ အထည်ချုပ်စက် သင်တန်းနှင့်အဆင့်မြင့်စက်ချုပ်(အထူး) သင်တန်းတို့မှ သင်တန်းသူများအား လက်တွေ့ သင်ကြားနေမှုကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
Total Visitors: 680261